Mid kamid ah Hogaamiyaha Maamulada Somaaliya oo dacwo laga gudbiyey. – Kismaayo24 News Agency
by admin 26th April 2019 015
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Xanaanada xoolaha ee maamulka Hir-Shabeelle Dr. Xuseen Cismaan Cilmi ayaa sheegay inay dacwad u gudbiyeen Guddoomiyaha Maxkamada sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed, taasoo ku aadan madaxda Maamulka Hirshabelle.
Sida uu sheegay Dr. Xuseen Cismaan Cilmi xubnaha dacwada gudbiyay ayaa gaaraya 11 xubnood oo ka tirsanaa wasiiradii hore ee maamulka Hirshabelle, waxayna sheegeen inay muddo 15 bilood aysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen Madaxweynaha Hirshabelle iyo ku xigeenkiisa.
Dr. Xuseen ayaa waxaa uu sheegay in Maalinta Isniinta ah dacwada la guda geli doono, isla markaana ay cadaalad ka sugayaan Maxkamada sare ee dalka.
Dhanka kale madaxda Hirshabelle ayaan illaa hadda ka jawaabin eedana loo jeediyay iyo dacwada laga geeyey maxkamada sare ee dalka, waana markii ugu horeysay ee Maxkamada sare la geeyo dacwad ka dhan ah mid ka mid ah madaxda dowlad
TOP NEWS: Galmudug oo Wafdi Wasiiro iyo Saraakiil isugu jirta u dirtay Deegaanadii Shalay lagu dagaalamay ee Gobolka Galgaduud
Mareykanka Oo Faahfaahin Kabixiyay Weerar Uu Ka Fuliyay Soomaaliya